​Hadii aad daahiso inaad canshuurtaada waqtigeeda ku xereyso, lacagta lagugu leeyahayna aad waqtigeeda ku bixin weyso, waxaa suurtoobi karta in lacag lagugu ganaaxo. Isticmaal warbixinta hoose si aad uga badbaadid in ganaax iyo dulsaar culeys ah lagu dul dhigo.
​Sidee uga badbaadi karaa ganaaxa?
​Xereey canshuurtaada ka hor bisha Oktoobar 15-keeda.
​Bixi canshuurtaada ayadoo dhameystiran intaan la gaarin Abriil 15-keeda
​Yaraanta Canshuurta aad Qiyaastey
​Bixi qiime canshuur aad qiyaastey sadexdii biloodba, waa hadii lagaa rabo. Macluumaad dheeri ah hadii aad rabto, fadlan booqo Qiyaasta Canshuurta Shakhsiyaadka.
​Dayacaad Waqtiga Canshuur Xereynta
​Hadii aad hesho Dalab lagaaga codsanaayo inaad canshuurtaada soo xereyso, fadlan ka soo jawaab warqaddaas muddo 30 cisho ah gudohood.
​Qiimeynta Canshuurta Aad Bixinteeda La Daahdey
Hadii aad hesho Amar Warqad Canshuureed, fadlan kaga soo jawaab warqaddaas mudo 60 cisho ah gudohood.
​4% qiimaha canshuurta aan la bixin ka hor Abriil 15-keeda.
​Buuxi Foomka Schedule M15, Underpayment of Estimated Income Tax, si aad u ogaato lacagta ganaaxaaga.
​5% qiima canshuurta aan la bixin waqtiga lagaa codsadey, ama $100 doolar (hadba kii badan).
​4% canshuurta aan la bixin 30 cisho gudohood ka dib marka la qiimeeyey canshuurtaada (sida, xal aad qaab abiil ah ku heshey), ama
Xasuusin: Waaxda Canshuuraha ee Gobolka Minnesota waxaa laga yaabaa iney qiyaasto ganaaxa lagugu qaadi karo haddii aad soo xereyso canshuur been ah ama khiyaano ku jirto si lacag laguugu soo celiyo. Ganaaxaas waxaa laga yaabaa inuu gaaro 50% canshuurta aad soo xereysey. Wixii macluumaad dheeri ah fadlan booqo Refundable Credits iyo Property Tax Refund.
2017 - Sanadkaan
​4% 3% ​5% ​8%